Ntuziaka iji bulie Email Gị Egwu, Pịa-Site, na Ọnụego Ntugharị | Martech Zone
Otu mkparịta ụka mụ na ndị ahịa na-enwe kwa izu bụ ihe na-emewanye nkụda mmụọ maka iwulite na ịkwagide mmemme ahịa email na-aga nke ọma. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ka ndepụta ahịa email gị na-eto, ya mere mee ka isi ọwụwa gị napụta gị. O yiri ka ndị na-enye ọrụ ịntanetị agbahapụla olileanya ọ bụla nke omume kacha mma na-akwụghachi ụgwọ ma nwee algorithms ndị dara ogbi nke na-aga n'ihu na-ata ndị ziri ezi ahụhụ.
Dị ka ihe atụ, otu n'ime ndị ọrụ ibe m na ụlọ ọrụ hụrụ Yahoo! igbochi 100% nke email ya - n'agbanyeghị ikpo okwu ya na-agbaso ihe niile ụlọ ọrụ ọkọlọtọ na kasị mma omume edepụtara site na Yahoo! postmaster. Dị ka ule, ọ kpaliri nnyefe ozi ya na adreesị IP ọhụrụ na ozi ịntanetị ya malitere na-enweghị nsogbu. Otu ọdịnaya, otu ndị debanyere aha, naanị adreesị IP dị iche. Mgbe ụfọdụ, m na-eche na ISP na-egbochi aghara aghara adreesị IP iji hụ ma ụlọ ọrụ ahụ azaghachi. Opekempe Yahoo! jụrụ ozi ịntanetị, ọ bụ ezie na… ọtụtụ ndị ISP ndị ọzọ na-eduga ha na folda junk amaghị onye zitere ha.
N'ezie, e nwere email emehie emehie na ị nwere ike izere mgbe ị na-ekepụta ndepụta na ọdịnaya gị. Nakwa, enwere ọtụtụ ụzọ iji rụọ ọrụ email gị. Ihe omuma a, Email Marketing njikarịcha Hacks & Ileba Studies, site na 99Firms nkọwa ọtụtụ nke usoro njikarịcha. Adịghị m nnukwu ofufe nke okwu ahụ hack… Achọpụtara m na ụzọ ndị a niile kwesiri ịnwale usoro mmemme email gị.
Optzọ Njikwa Email Gụnyere
Isiokwu Line njikarịcha - Algọridim na onye debanyere aha na-eme ka isiokwu ahụ bụrụ akụkụ kachasị njọ nke ịnweta email zoro ezo ma ọ bụ pịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye ọnụ Emoji dị ka nke ọma.
Ederede ederede - Mgbe anyị ji ihe ederede siri ike nke edobere ederede ederede nke akwụkwọ akụkọ mbụ anyị, anyị hụrụ mmụba ozugbo na ntinye igbe na ọnụego emeghe. Ndị mmadụ na-agụ nyocha ndị ahụ - jiri nke ahụ mee ihe!
Ziri ozi aha - 68% nke ndị America na-emeghe email ha dabere na "Site Aha" ha na-ahụ. Aha aha gị ọ na-anọchite anya ụlọ ọrụ gị nke ọma? O dakọtara na adreesị email gị?
Nkewa - Ikenye aha ahia email gi na ichota ọdịnaya na-eme ihe di egwu ma na-eleghara ya anya n'ihi mgbagwoju anya. Okwesiri ịgbalịsi ike na ọtụtụ ntanetị ịntanetị na-akwado ya.
Personalization - Gafere [Fanye Aha izizi] ma nye nkọwa na mkpọsa email gị nke akọwapụtara maka ozi onye debanyere aha gị na ịzụta akụkọ ihe mere eme. Ndị na-ezigara email ahụla mmụba nke 92% na ọnụọgụ ugboro ntụgharị mgbe emelitere ozi ịntanetị ahaziri.
Akpaaka na ịkpalite - Oge bụ ihe niile, yabụ ịnweta ozi dabere na atụmanya gị ma ọ bụ omume ndị ahịa dị mkpa iji mee ka mmekọrịta ahụ gaa n'ihu.
Bọtịnụ na Oku-Ime - Ọ bụrụ na ị sere foto email gị dị ka peeji nke ọdịda, enwere oku na-eme ka ịdenye onye ahụ debanyere aha ya na nzọụkwụ ọzọ iji soro akara gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na-efu nnukwu ohere iji bulie email gị.
Images - Igbe mbata na-arụsi ọrụ ike, yabụ ịtụ anya ka onye debanyere aha gụọ okwu ọ bụla ejiri nlezianya deere nke ị tinyere na email gị agaghị eme. Dịkwuo njikọ aka na pịa-site na ịnye ihe ngosi na-akpali akpali iji dọta onye debanyere aha iji gụọ ma pịa. Gbakwunye gifs eserese ka ị gbakwunye flair!
Video - Ọ bụ ezie na ọtụtụ nyiwe ozi-e anaghị akwado vidiyo, ị nwere ike inye opekata mpe nke vidiyo gị na bọtịnụ egwuregwu. Mgbe onye debanyere aha pịa bọtịnụ egwu, weta ha na peeji nke akpaaka malitere vidiyo maka ha!
Egwu Na-efu (FOMO) - imepụta echiche nke ịdị ngwa na gburugburu ozi ịntanetị gị nwere ike ịmegharị ọnụego emeghe na ọnụego ntụgharị dị oke mkpa. M hụrụ n'anya incorporating ngụda animations ụgbọala n'ụlọ ihe na e nwere ihe ngafe metụtara na-enye.
Oge oge - Chefuo ihe oge kacha mma iji zipu okwu nzuzu. Nwalee oge izipu dị iche iche maka email gị wee ziga ya mgbe ọ nwere nnukwu ọdịiche. Nwedịrị ike ịchọrọ ịkekọrịta na ịghapụ na-adabere na mpaghara oge.
Nzaghachi ekwenti - 42% nke email niile mepere ga-eme na ngwaọrụ mkpanaka. You enyochala email gị iji hụ ka ọ si dị na ngwaọrụ mkpanaka? The nwere ike iju gị anya, ma ọ bụ ụjọ ya, na mmetụta nke ozi email emezughị nke ọma.
Ọdịnaya Email - Ogo nke ọgụgụ na ogologo nnomi nwere ike inwe mmetụta na pịa ị pịa-site na ọnụego ntụgharị.
Nhazi email - Gbalịa izipu naanị ederede ederede karịa email HTML iji hụ ihe nzaghachi nzaghachi bụ? Ọ bụ ezie na ozi ịntanetị HTML nwere ike ịdị mma, ha nwere ike ọ gaghị enweta nlebara anya na email ederede na-eme!
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, yana ụfọdụ ihe ọchị na ọnụ ọgụgụ niile!
Tags: oge kacha mma iji zipuakpaaka emailbọtịnụ emailịkpọ oku ka ime iheỌdịnaya Emailnhazi emailihe oyiyi emailmmemme ịre ahịa emailemail njikarịchaemail nkeonwepreheader emailemail nkewaemail zipu ogeemail na-ezigaederede emailemail na-akpali akpalividiyo vidiyona-atụ egwu na-agaghị efufomosite na ahaemail HTMLalanjikarịchaederede ederede ederedeederede mbuonye nzipu ozi ahaUsoro isiokwutesting